Bokin' ny Nomery - Wikipedia
Bokin' ny Nomery
(tonga teto avy amin'ny Bokin'ny Nomery)
Ny Bokin' ny Nomery na Bokin' ny Fanisana na Bokin' ny Fivahiniana izay hafohezina amin' ny hoe Nomery na Fanisana na Fivahiniana dia boky fahefatra ao amin' ny Baiboly izay manohy ny tantara ao amin'ny Eksôdosy (na Eksaody) momba ny fivezivezen'ny Israelita tao an-tany efitra notarihin'i Mosesy (na Môizy) hatrany amin'ny lemak'i Moaba, tsy lavitra ny tany Kanaana. Boky ao amin'ny Testamenta Taloha ny Nomery na Fanisana. Ny Bokin' ny Nomery ao amin' ny Baiboly jiosy dia isan' ny Tôrah, fa ao amin' ny Baiboly kristiana kosa dia isan' ny Pentateoka.
Ny vay nahazo ny Zanak'i Israely nihinana papelika, nataon'i Gerard Hoet (1648-1733), 1728
1 Anarana sy sokajin' ny boky
1.1 Anaran' ny boky
1.2 Sokajin' ny boky
2 Firafitry ny boky
2.1 Ireo roapolo andro farany tao Sinay
2.2 Nivezivezy sivy amby telopolo taona
2.3 Ny fahatongavana teo akaikin' i Kanaana
Anarana sy sokajin' ny bokyHanova
Anaran' ny bokyHanova
Ny teny hoe Nomery dia avy amin' ny teny latina hoe Numeri, lohatenin' io boky io avy amin' ny teny grika hoe Αριθμοί / Arithmoi izay azo adika hoe "fanisana", izany hoe fanisam-bahoaka. Ny hoe Fanisana kosa dia fandikana amin' ny teny malagasy izany teny grika sy latina izany. Tsy ny fanisam-bahoaka loatra anefa no lohahevitra tena iompanan' io boky io. Ao amin' ny Tanakh izy dia atao amin'ny teny hebreo hoe ספר במדבר / Sefer Be-Midbar ("boky tany an-tany efitra") izay mifanentana kokoa amin' ny zavatra resahiny.
Sokajin' ny bokyHanova
Ao amin' ny Tanakh (Baiboly hebreo) dia boky ao amin' ny sokajy voalohany atao hoe Tôrah ny Sefer Be-Midbar, fa ao amin'ny Baiboly kristiana kosa dia isan'ny Pentateoka ny Bokin'ny Nomery na Fanisana.
Firafitry ny bokyHanova
Azo zaraina telo ny Bokin' ny Nomery:
Ireo roapolo andro farany tao SinayHanova
Ny fizaràna voalohany (Nom. 1.1 - 10.10) dia mirakitra ny fanisam-bahoaka natao, ny fandaminana ireo foko roa ambin' ny folon' i Israely, ny sata manokan' ireo Levita, ny fanaovam-panatitra isankarazany, ny fankalazana ny Paska, ary ny fanambaràna ny fanohizana ny dia ho any Kanaana.
Nivezivezy sivy amby telopolo taonaHanova
Ity fizaràna faharoa ity (Nom. 10.11 - 21.35) dia mitantara ny fivahinian' ny Zanak' i Israely tao Kadesy, ny fandaminana ny asan' ireo Levita, ny fiaingana avy eo Kadesy, ny sakantsakana tao Edôma, ny nahafatesan' i Aarôna, ny amin' ilay menarana varahina, ary ny nandresena ny Amalekita sy ny nahazoana an' i Basàna.
Ny fahatongavana teo akaikin' i KanaanaHanova
Ny fizaràna farany (Nom. 22 - 36) dia mitantara ny fahatongavan' ny Zanak' i Israely teo amorony atsinanan' i Jordana, teo amin' ny tany Kanaana, ireo lalàna isankarazany, ny amin'i Balama, ny ady tamin'ny Madianita, ny nanendrena an' i Jôsoa ho mpitarika, ary ny fomba hizaràna ny tany.
Boky ao amin' ny Pentateoka:
Bokin' ny Genesisy
Bokin' ny Eksôdosy
Bokin' ny Levitikosy
Bokin' ny Deoterônômia
Petra-kevitra momba ny fanoratana ny Pentateoka
Petra-kevitry ny sombin-dahatsoratra
Petra-kevitry ny fameno
Fizaràna hafa ao amin' ny Testamenta Taloha:
Bokin' ny Mpaminany
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_ny_Nomery&oldid=1041805"
Dernière modification le 18 Desambra 2021, à 19:51
Voaova farany tamin'ny 18 Desambra 2021 amin'ny 19:51 ity pejy ity.